Ogwu ogwu o buuru gi nsogbu? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Otutu ugu ose - esi edozi
Otutu ugu ose - esi edozi
Ogwu ogwu o buuru gi nsogbu?
Ọgaranya na cell na-echebe antioxidants na okpomọkụ a na-apụghị ịkọwa akọwa, pawuda bụ kpakpando mgwa nkeugu ose. E nwekwara ụfọdụ nnyocha na-akwado na cinnamon nwere ike inyere ndị ọrịa mamịrị mma ịchịkwa ọbara shuga. Ọdịda ọzọ na-ekpo ọkụose, nutmeg na-etu ọnụ obere eriri, ọtụtụ vitamin B na mineral.
Ọ nwere ọtụtụ uru ahụike dị ike. Na mgbakwunye, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, ọnụ, na nke bara ụba enwere ike iri n'ọtụtụ ụzọ, site na ụtọ, ụtọ desserts na salads dị ụtọ, kọfị, mmanya, na ọbụna akpu.
Tupu anyi agaa n’ihu, ka m mee ka o doo gi anya na ugu bu udiri ugu. Teknụzụ, ọ bụghị mkpụrụ osisi ma ọ bụ akwukwo nri. Ndị mmadụ na-ekpebisi ike dabere na otu esi esi nri achịcha ugu, ị nwere ike ịsị na ọ bụ mkpụrụ osisi n'ihi ụtọ ụtọ ahụ.
Ma ọ bụrụ na ọ bụ akụkụ nke ofe esi nri na anụ na ngwa nri, enwere ike ịkpọ ya akwukwo nri. N'isiokwu nke taa, anyị ga-ekwu maka uru ahụike nke ugu ga-eju gị anya. Echefukwala ịkụ mgbịrịgba ọkwa.
Mbo mbuso agha gị: A na-ebufe vitamin C, nke na-eme ka usoro ahụ gị ji adị ọcha na-eme ka ọ na-acha ọcha Na-akwalite mkpụrụ ndụ ọbara n'ahụ gị. Ugu nwekwara beta-carotene, nke na-agbanwe n'ime vitamin A na ahụ gị. Nnyocha e mere egosiwo na vitamin A na-enye aka ime ka ahụ́ gị ji alụso ọrịa ọgụ ma na-alụso ọrịa ọgụ.
Ọ bụ ihe dị mma mgbe niile n'oge ọdịda ma ọ bụrụ na oyi na flu na-adịkarị, na-agbakwunye ugu na nri gị. Nwere ike ịme ugu paịlị smoothie site na ime 1. ikpokọta / iko 2 nke ice cream, 1/2 iko abụba na-enweghị yogọt, 1 tsp.
Mmanụ aeyụ, 1/4 tsp. Ugu paịndị na 1/4 iko ugu puree ma gwakọta ihe niile ọnụ. Ọ dị mma ma na-atọ ụtọ! Na-eme ka anya gị dị mma: Dịka e kwuru na mbụ, ugu nwere beta-carotene na carotenoids.
Dị ka otu nnyocha si kwuo, ha na-enyere aka belata ihe ize ndụ gị nke ịrịa ọrịa anya na-adịghị ala ala, gụnyere nhụjuanya anya nke afọ na cataracts. N'ihi nnukwu ọdịnaya nke vitamin C, ugu na-ebelata ihe ize ndụ nke macular degeneration, nke bụ isi ihe na-akpata ikpu ìsì na ndị okenye. Vitamin A na-echekwa cornea ma na - enyere anya gị aka ịhụ na obere ọkụ.
Funzọ na-atọ ụtọ iri ugu bụ na ice cream. Dị nnọọ tinye 1 iko mkpọ ma ọ bụ ọhụrụ ugu puree 1 teaspoon. Ugu paịnd maka ọkacha mmasị gị vanilla ice cream uzommeputa.
Ifriizi dị ka ntuziaka igwe igwe ice cream gị ma nwee ọmarịcha ugu ice cream! Na-akwalite Uto ntutu: Mkpụrụ osisi oroma a dị ezigbo mma maka ntutu gị. Ọ bụ ọgaranya iyi nke mineral dị ka potassium na zinc. Potassium na-enyere aka ime ka ntutu dị mma ma na - eme ka ọ dị mma.
Zinc na-enyere aka ịchekwa collagen, nke na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkwalite ntutu dị mma. O nwekwara folate, ihe B vitamin dị mkpa nke na - akpali uto ntutu site na ime ka mgbasa ọbara na - agawanye. Ou nwere ike ịkwadebe edozi edozi ntutu dị mfe site na ugu.
Naanị gwakọta iko abụọ nke ịmịcha na sie ugu na 1 ngaji mmanụ oyibo, ngaji mmanụ a honeyụ na 1 ngaji yogọt. Mee puree, tinye mmanụ oyibo na mmanụ a honeyụ iji nweta ngwakọta na-atọ ụtọ. Tinye ya na ntutu ntutu ntutu, nke na-eyi mkpuchi okpu plastik ma hapụ maka nkeji iri na ise.
Itucha juputara na ịke dị na mbụ! Na-edo Obi Gị Ike: Iri ugu n’ahu mgbe nile nwere ike baara gi uru nke oma n’ime obi gi, ya na potassium, bu nke bara uru maka obara mgbali obara gi ma duga kwa ezi obi. Otu nnyocha e mere na nso nso a gosiri na ịnweta potassium zuru oke nwere ike bụrụ ihe dị mkpa dị ka mbenata nnu na-agwọ ọbara mgbali elu.
Ndị antioxidants dị na ugu nwekwara ike igbochi ụdị kọlesterol dị njọ site na ịgbanye n'ahụ gị, na-agbada n'ihe ize ndụ nke ọrịa obi. Nwere ike ịme obere ugu na ude mmiri ara ehi gbasaa site na ịgbakwunye 1/2 iko nke ugu ugu, 2 tbsp. Sugar na 1/2 tsp.
Ugu achịcha sizinin na 8 ounces obere abụba cheese. Nwere ike iji mgbasa a na tost ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ! Na-enyere Gị Aka Srahụ ụra: Otu uru ahụike bara uru nke ugu bụ na ọ ga-enyere gị aka ihi ụra nke ọma. Ugu dị elu na tryptophan, amino acid nke na - enyere aka ịme ka ụra na - atụ gị.
Tryptophan bụkwa ọrụ maka ahụ gị na-eme serotonin, ihe na-eme ka ọ dị mma na-enyere gị aka izuike ma zuru ike. Rie ugu site na udara onyinye a. Na nnukwu pan na-enweghị osisi, ighe ọtụtụ cloves nke galik na ọkara yabasị, diced.
Ekem tinye iko 2 nke ugu puree ma bido. N'ikpeazụ, tinye sage ọhụrụ ma ọ bụ rosemary ma jee ozi na pasta zuru ezu. Gị nke gị ezigbo ike noodles! Na-enyere aka megide ọrịa shuga: Ugu n'ime ụdị ya dị ọcha bụ otu n'ime mkpụrụ osisi nwere calorie kachasị ala.
Dị ka ị maara, iri nri kalori dị obere bụ isi ihe dị mkpa iji debe ọrịa shuga nke ụdị 2, nke na-eme ugu ugu nhọrọ dị mma. Na-a toa ntị na ugu mkpọ na-enweghị agbakwunye shuga, ị nwere ike ịnụ ụtọ ha niile n'afọ niile. A na-ejikwa phytochemical nke phenolic na-ejikwa ugu eme ihe, nke egosiri na ọ na-achịkwa ogo shuga dị na ọbara, na, n'aka nke ya, belata ihe ize ndụ nke ọrịa shuga.
Faiba nke dị n’ime ugu na-enyekwa aka ịkwado ọkwa shuga dị n’ọbara, na-enyere aka ịbelata ibu ma na-enyekwa aka n’ọrịa shuga. Na - enyere gị aka jupụta ngwa ngwa: A na - atụ aro ka ahụ gị nweta eriri eriri 25-35 kwa ụbọchị, nke ọtụtụ n'ime gị agaghị ezu. Zọ dị mfe iji bulie nri fiber gị bụ site na ugu.
Otu iko ugu nwere ihe dị ka gram 7 nke eriri. Nke a dị mma iji mee ka ị nwee afọ ojuju. Fiber na-enye aka na mgbaze gị, na-ebelata cholesterol gị, na inye aka igbochi agụụ gị ogologo oge. Ọ bụ nri dị ukwuu maka ụkọ ọnwụ n'ihi na ị nwere ike iri karịa ya karịa isi nri ndị ọzọ dị ka osikapa na poteto, mana ka na-eri obere calorie.
Ọ Dị Mma Maka Akpụkpọ Gị: Pumpkins nwere ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme ka ọ bụrụ ihe dị ịtụnanya maka akpụkpọ gị, gụnyere enzymes mkpụrụ osisi na alpha-hydroxy acids (AHAs) nke na-eme ka ntụgharị mkpụrụ ndụ na-eme ka anụ ahụ gị dịkwuo mma ma na-eme ka ọ dị mma. Na vitamin A na C nke nwere ya, ọ ga - enyere gị aka dị nro ma mee ka akpụkpọ gị dị nro ma mepụta mmepụta ihe ndị na - eme ka ị na - eme ihe. Nke a na-egbochi ihe ịrịba ama nke ịka nká.
Ugu nwekwara zinc, nke na-enyere aka igbochi ogo hormone na mmepụta mmanụ. Nke a bara uru ma ọ bụrụ na ị nwere mmanu mmanu na ihe otutu. Kedụ ka ị ga-esi jiri ugu tinye ihu gị? Nwere ike ịme mkpuchi ihu ugu dị mfe site na ịgwakọta teaspoons 2 nke ugu esi esi na 1 ngaji mmanụ a andụ ma tinye ya na ihu gị niile, na-ezere ebe anya.
Hapụ ya ka ọ nọdụ ihe dịka minit 10-15 tupu ịsachapụ iji wepu ma kpughee akpụkpọ dị larịị, hydrated, na-enwu gbaa! site n'ọtụtụ ọrịa cancer. Dị ka otu nnyocha si kwuo, ọtụtụ carotenoids dị na ugu nwere ike ikere òkè na mgbochi kansa. Beta carotene isi mmalite nri na-arụ ọrụ nke ọma karịa mgbakwunye nri, ọkachasị ma ọ bụrụ na isi mmalite nri nwere carotenoids zuru oke.
Ọ bụrụ na ị na-achọ nri ọzọ dị mma iji gbochie kansa, ugu bụ azịza ya. Kedu ụzọ kachasị amasị gị iji rie ugu? Nwere otu tried gbalịrị usoro nri ndị a kpọtụrụ aha? Mee ka anyị mara na ngalaba nke dị n'okpuru.
Nwere ike ịdoụbiga mmanya ọkụ na ugu?
Ọ bụ ezie na ọ dị oke ụkọ, na ọnọdụ ahụ dị ntakịrị, ọ bụ nchegbu na ọ mere na nso nso a na New York. Obi dị m ụtọ na nwata ahụ dị mma ma na-atụ anya na ọ ga-agbake.Ọkt 14 2019
Sirop sirop bụ ụkwara. Ọ bụghị maka ememme, ọ bụghị maka memes.
Ihe a ekwesighi igwu egwu n'ihi na o gha emebi ndu. TikToker loro lita mmiri ọgwụ ụkwara n'oge nri ehihie. Nke ahụ bụ ihe mere HisBrain.
BW bụ nwoke 35 dị afọ na-egosi onwe ya amaghị na ụlọ mberede. Nne ya Gina na-agwa nọọsụ na-anata na ọ hụrụ nwa ya ka ọ na-ada n'ala na-acha anụnụ anụnụ na ihu. Ọ na-ejide iko efu nke styrofoam.
Ndị ọrụ ahụike gbalịrị inye ya ọgwụ maka ọgwụ ha chere na ọ na-a drinkingụ, ma ha ga-enye ya ugboro atọ tupu ọ zaghachi. Mgbe ahụ, obi ya kwụsịrị ịkụ ụgbọ ala. See hụrụ, BW bụ onye TikToker na-egwuri egwu n'ìgwè.
Afọ ole na ole gara aga ọ nọ na nnọkọ oriri na nkwari. Onye obia nyeere ha mmanya na iko styrofoam toro ogologo. Soda, swiiti siri ike, na ọgwụ ụkwara mmiri ọgwụ.
A maara dị ka mmiri ara ehi ma ọ bụ mmanya na-acha ọbara ọbara, ngwakọta a bụ ihe ama ama na Houston ma mara maka ịme ihe dị egwu na ahụ, mana BW enweghị nsogbu na ya. Ọ bụ naanị ụfọdụ swiiti na lemonade, ọ chere. Ozugbo iko ya mbụ, BW nwere nnukwu obi ụtọ.
N'abalị ahụ, ọ nwere ezigbo ụra ụra na ndụ ya. Ihe ọ bụla dị na iko ahụ, ọ chọrọ karịa ya. Ndị na-akwado oriri na nkwari ahụ nwere ike ime nke ahụ.
Ndị enyi BW kwara ya emo maka ịkpọ ya 'fechaa' n'ihi na naanị ya chọrọ ị drinkụ ihe ruru otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ego onye ọ bụla ọzọ iji nweta otu mmetụta ahụ. BW malitere imepụta edemede TikTok ihe dịka otu afọ gara aga. Na mbu o mere nke a iji kwalite egwu ya.
Mana mgbe ahụ ọ malitere ị drinkingụ ọgwụ ụkwara ya n’akwụkwọ ya. Ndị mmadụ matara iko nke styrofoam. Knew maara ihe na-eme.
Na BW jiri ohere obula cheta. Otu ụbọchị, BW kwụsịrị ịgafe. Mgbe ahụ ọ ga-amalite ịrịa ọrịa.
Ọ ga-amalite site na imi na-agba agba na imi. Olu dị n'isi ya ga-eme oké mkpọtụ tupu ọ nụ ụbụrụ ya na-akụ n'akụkụ akụkụ okpokoro isi ya. Afọ ya makwasikwara ike na ntì ya na ntì ya abụọ ga-akpọrọ ya n’ala.
Ihe ojoo ga-abịa, mgbe ahụ echiche ndị gbara ọchịchịrị ga-edozi. Mana nke ahụ bụ ihe ọchị TikTok, ọ chere. Ọ bụ ezie na echiche ya dị mma, n'oge ụfọdụ ọ chọrọkwu sirop ka ọ nwee mmetụta nkịtị.
Izuụka atọ gara aga, BW dara ọrịa oyi baa. Dọkịta chọpụtara na ahụ siri ya ike. BW ekwughị ihe ọ bụla gbasara àgwà ị drinkingụ mmanya na-acha odo odo.
N'ezie, ọtụtụ ndị na-emegbu ya dị ka ndị nkịtị. Dọkịta ahụ nyere ya ọgwụ nje. BW gbalịrị ịjụ maka ọgwụ ụkwara ọgwụ, ma dọkịta gwara ya ka ọ zụrụ ihe niile na mpempe akwụkwọ.
Mgbe ụkwara sirop na ọgwụ nje nọkọtara ọnụ, agaghị m akwa ụkwara ọzọ, ọ chere. BW chọpụtara na ị takingụ ọgwụ nje ndị a na ihe ọ hisụ hisụ ya na-atọ jụụ. Ọ dị ka ị drinkingụ sirop ya na nke mbụ ya, ọzọ.
Ọ reallyụghị mmanya karịa otú ọ na-adịkarị. Ozugbo ị drinkingụsịrị nnukwu iko, BW dị mma. O gosipụtara ihe niile n'ịntanetị.
Ọ nwere ike ịnụ ọsọ ahụ ka nkeji oge gafere. Ọ na-achọ ibili. Ọ dị ka onye ziri ezi, ma ọ bụghị ya.
Ọ gara ụlọ ịsa ahụ. Ihe niile doro anya ọzọ. Ma mgbe ahụ ọ dị ya ka ọ na-ese n'elu ya n'onwe ya.
Ubi ya nke ọhụụ malitere ịmalite ịgba ọchịchịrị n'akụkụ anya ya. Ọ nọ ọdụ na mposi, na-amaghị ebe ọ nọ mgbe ọ kwụrụ n'isi. Ma ka nkeji gafere, BW kwụsịrị iku ume.
Nne ya na-abịakwute ya. Ọ hụrụ na ọ naghị anabata ya, na ọ naghị eku ume, oyi na acha anụnụ anụnụ na ihu mgbe ọ kpọrọ 911, a kpọga ya ụlọ mberede ebe anyị nọ ugbu a. N'oge nnyocha ahụ, ndị dọkịta maara na ọ bụ sirop ụkwara.
Nne ya gwara ha na ya hụrụ ya n’ala n’aka ya bu iko styrofoam. Ọ maara banyere omume ya mana ọ meghị ọtụtụ ihe banyere ya ọtụtụ afọ. Ọ maghị ókè mmanya ọ drankụrụ, ma ọ gbasaghị ya.
Obi ya kwụsịrị na ụgbọ ihe mberede. Akpụkpọ ahụ ya gbajiri n'ihi ịkwụsị iku ume ruo minit. Upmụ akwụkwọ ya dị ka atụdo.
Ihe a niile na-agwa ndị dọkịta ihe ha kwesịrị ịma ozugbo. Sirop na ụkwara sirop na dabere ma ọ bụ na-acha odo odo ọ drinkụ aụ bụ a ngwakọta nke 2 dị iche iche ọgwụ, promethazine na codeine. Promethazine bụ ọgwụ nfụkasị.
Ọ bụ otu otu dị ka Benadryl. N'ọtụtụ buru ibu, ọ na-egbochi izu ike ma na-agbagha mgbaàmà site na usoro ụjọ ahụ. Nke na-adọrọ mmasị n’ihi na ya na codeine na-emekọrịta ihe.
See hụla, ihe gbasara codeine bụ na ọ naghị arụ ọrụ n’ime mmadụ. Mana mgbe imeju gbarisịrị ya, ọ ga-aghọ ozigbo na morphine. Morphine bụ ihe okike.
O si na opium poppy. N'ezie, opium poppy bụ ngwakọta morphine na codeine ọnụ, ya mere codeine bụkwa ihe okike. Morphine bụ ezigbo ọgwụ eji ya n’ụlọ ọgwụ.
A na-eji ya belata ihe mgbu, mana ọ na-eme ọtụtụ ihe ndị ọzọ n'ahụ. Otu puku afọ gara aga, ndị dọkịta Arab jiri ya na-agwọ afọ ọsịsa n’ihi na morphine na-ebelata akwara afọ. Dị nwayọ nke eriri afọ na-eme ka eriri afọ jiri oge iji banye mmiri iji mepụta oche kwesịrị ekwesị.
Mana ọ bụrụ na mmadụ enweghị oche dị nro ma nwee morphine na ahụ ha, mgbe ahụ eriri afọ ahụ ga-eweghachi mmiri buru ibu site na oche ahụ ma sie ike, na-eduga na afọ ntachi na-adịghị ala ala nke BW nwere. Na ngụgụ, morphine na bronchioles na-arụkọ ọrụ ma nke a na-egbochi ụkwara, yabụ enwere codeine na syrup ụkwara. Mana nke ahụ abụghị ihe mere BW ji kwụsị iku ume n’oge a.
Ọ kwụsịrị iku ume n'ihi na morphine na-esokwa ụbụrụ arụkọ ọrụ. Mgbe morphine jikọtara ya na irighiri akwara nke na-enwe mmetụta ụfụ, ọ na-egbochi mgbaàmà mgbu ahụ. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ ihe na-ebelata ihe mgbu.
N'ezie, anyị ahụbeghị ọgwụ dị mma maka ọgwụ mgbu karịa opioids. Ma mgbe morphine na-ejikọta n'akụkụ ụbụrụ ndị ọzọ, ọ na-ewepụta kemịkal nke na-eme ka euphoria nwee mmetụta. N'ihi nke a, ọ eụ ahụ na-eto mgbe e jikọtara ya na ihe ndị ọzọ na-egbochi kemịkal ndị a na-adị mma ka ọ daa.
Andmorphine na-ejikọta ụbụrụ ụbụrụ nke na-achịkwa iku ume. Mgbe oxygen n'ime ọbara dị ala, ụbụrụ gị ga-agwa ahụ ka ọ gbalịa iku ume ngwa ngwa ma dị omimi iji dochie ya. Mana ụbụrụ ụbụrụ BW enweghịzị ike ịgwa ahụ ka ọ mee nke a n'ihi na codeine dị na mmiri ụkwara ya agbanweela ya morphine site na ụbụrụ ya egbochikwa ahụ ya iku ume.
Ebugara BW na ngalaba nlekọta kpụ ọkụ n'ọnụ. Maka na mgbe obi mmadu na akwusi iku, enwere ike ichu ikuku oxygen zuru n’uche ya oge ufodu. Ogologo oge, ka o yikarịrị ka ọ ga-emebi emebi kpamkpam.
Na BW enwere mmebi na-adịgide adịgide. Otu x-ray nke isi ya na-egosi na akụkụ nke ụbụrụ BW nwụrụ n'ihi enweghị oxygen. Mgbe ọ matara na ngalaba a na-enye nlekọta kpụ ọkụ n’ọnụ, ọ naghịzi anụ ihe na ntị aka ekpe ya.
Ihe a niile na - eme n'ihi ụbụrụ nke ụbụrụ kpatara site na iku ume ruo ọtụtụ minit, mana ihe adịghị mma. Codeine bụ naanị ihe dịka 10% dị ka morphine n'ọtụtụ mmadụ. Yabụ, ịchọrọ karịa ma ọ dịkarịa ala ugboro 10 nke codeine iji nwee otu mmetụta dịka morphine.
Ebe ọ bụ na ị kwesịrị ịgwọ ụkwara na sirop, ị chọghị ụdị ọgwụ ahụ dị ukwuu. Mana ihe gbasara codeine - syrup promethazine bụ na otu ndị na-a itụ ya nke mbụ na-ekwu na ha anaghị eche nke ọ bụla. Still ka na-arịa ụkwara emechaa.
Ọ dị ka ọ naghị arụ ọrụ maka ha. Gịnị kpatara nke a? Otu mmadu ndi mmadu na - abukari ndi oru codeine - promethazine cough syrup. Ha ga agwa gị na o bibiri ndụ ha n'ihi na ha chọrọ ya kwa ụbọchị ma ọ bụghị ya, ha agaghị enwe ike ịrụ ọrụ.
Ya mere, gịnị kpatara ọdịiche ahụ? Ma ọ bụrụ na codeine bụ naanị 10% nke ike nke morphine, na morphine adịghịdị ike dịka ụfọdụ ihe ndị ọzọ n'ebe ahụ, kedụ ihe mere BW? Nke a na-akpọghachite anyị na imeju. Akụkụ imeju na-eme morphine site na codeine. Akụkụ ọzọ na-eji codeine eme norcodeine, nke anaghị arụ ọrụ ozugbo.
Yabụ nke a kọwara ihe kpatara codeine ji bụrụ naanị 10% n'ike nke morphine, mana gịnị kpatara umeji ji eme nke a? Imeju bụ ebe nhicha nke ahụ gị. Kwesighi ihe mgbakwunye dị mma ma ọ bụ na-ehicha n'ihi na ị nwere imeju. Detox pụtara na mkpokọta kemịkal iji mee ka ha kwụsie ike.
Ebe obibi pụtara na ọ naghị emeghachi ahụ ndị ọzọ. Maka na ọ bụrụ na ha emeghachi omume, ọ pụtara na ọ nwere ike ịkpata mmerụ ahụ. Na okike, nkwụsi ike na-apụtakarị ihe dị mfe.
Gbaji akụkụ na-eme ka ihe dị mfe. “Alaka” ndị a kewasịrị. N'okwu nke elu nke akụkụ imeju, nke ahụ bụ morphine.
N'okwu dị ala nke akụkụ nke ọzọ nke imeju, ọ bụ norcordeine. Nweghịkwa ike iji nke ọ bụla mee ihe ọ bụla, n'ihi na mgbaaka ndị a na-adịkarị jụụ na okike. Ma ọ bụrụ na BW, nke chugs fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu lita nke sirop, abụghị ihe ọ na-erikarị, olee otú o si kwụsị iku ume na mberede? Kedu ka o siri dị na mberede dịka ọ drunkụchara 10x syrup karịa nkịtị? Ọfọn, anyị maara na e wuru ndị dị iche iche.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ike ịnwe ite kọfị niile n'etiti abalị iji hie ụra n'elekere 1am, ị nwere ike ịnwe enyi na-a aụ kọfị n'ehihie ma tinye ya ruo ụtụtụ echi, nke pụtara na ị na-eji caffeine Enweghị ike idozi nsogbu, mana enyi gị enweghị ike. Ihe dị iche na ụmụ mmadụ bụ n'ihi ọdịiche dị na mkpụrụ ndụ ihe nketa anyị na a na-akpọ ọdịiche ndị a mmụba. Remember chetara na ụfọdụ ndị anaghị eji ọgwụ codeine eme ihe ọ bụla? Ọfọn, ha nwere ike inwe mkpụrụ ndụ ihe nketa nke na-eme ka akụkụ imeju ha ghara ịrụ ọrụ nke ọma.
Ihe nke a putara bu na anaghi etinwu codeine n’ime morphine n’ime ndi a. The dum dose na-adịghị ọrụ. Ọ bụrụ na codeine anaghị agbanwe agbanwe na morphine na ndị a, mgbe ahụ ụkwara ụkwara agaghị arụ ọrụ n'ime ndị a.
Ọ bụrụ na mmadụ nwere mmụba nke na-anaghị ekewapụta codeine ka ọ bụrụ morphine, onye ọzọ ga-enwe mmụgharị dị iche nke ga-ekewa ọtụtụ codeine na morphine. Nke a pụtara na ndị a hyperfunctional ndị mmadụ ga-atụgharị niile nke codeine n'ime morphine. Mgbe ahụ ọ bụghịzi ike 10%, mana ọ ruru nso na 100%.
Remember chetara na ndị enyi ya kpọrọ BW fechaa Ọfọn, mgbe ị gbanwere ọtụtụ codeine na morphine, ị gaghị a toụ ihe ọ toụ toụ iji nweta otu mmetụta ahụ. Nke a nwere ike ịbụ ihe mere o ji nwee ike ị drinkụ obere sirop karịa onye ọ bụla. Ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, ọ pụtara na ihe ka njọ karịa karịa ka o chere n'echiche ụlọ mberede.
See hụrụ, ọgwụ nje BW were were maka oyi baa ya na akụkụ nke imeju na - agbasaghị codeine mebisịkwara. N'ezie, ọgwụ nje a na-ejide akụkụ imeju a niile ma ghara ikwe ka ihe ọ bụla banye. Ya mere ọ bụrụ na mkpụrụ ndụ ihe nketa BW gbanwere codeine ọzọ na morphine karịa ndị ọzọ, akụkụ nke ọzọ nke imeju ya na-egbochikwa ịmalite codeine ma ọlị, mgbe ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ codeine ọ drankụrụ na TikTok ghọrọ morphine wee kpuchie ahụ ya nke ukwuu, ọtụtụ ihe karịa ka ọ na-adịbu.
O nwere mmetụta nke ọma na ụbọchị 2 mbụ, mana ka ọtụtụ ọgwụ nje na-egbochi imeju ya, ọtụtụ morphine wuru ruo ebe ọ kwụsịrị iku ume na akụkụ ụbụrụ ya na-emebi kpamkpam. N'ụlọ ọgwụ, BW kpaliri ya. Ọdụ ka ọnọdụ ya kwụsiri ike.
Ndị dọkịta kwesịrị ịkpọga ya ka ọ laghachite na nlekọta ndị ọzọ, ma oge nlekọta ya na-eru nso dị ka a hapụrụ ya n'ụlọ. Ka ụbọchị na-aga, BW gbalịrị ịnagide ya. Afọ niile nke ụkwara sirop na-eme ka ahụ ya mụta ma gbanwee.
Ọ bụrụ na enwere otutu morphine iji kee eriri afọ, iji belata ya, iji kee akwara mgbu iji gbochie akara ngosi ahụ, ahụ ga-agbanwe ma mepụta ọtụtụ akụkụ ndị a ka morphine na-ejikọ nwere ike ikwenye na ndidi na ntụkwasị obi na-emepe emepe, nke gosipụtara dị ka mgbaàmà nke iwepụ. Ma oburu na mberede, n’otu ubochi, osighi ogwu ozo n’adighi, odighi nwayọ nke afo osiso osiso, bile na aputa na isi ya. Ọ dịghị ihe sirop na-egbochi irighiri akwara mgbu pụtara isi ihe mgbu na-abanye na ihe niile na-afụ ụfụ.
A na-akpọ nke a ndọrọ ego. Ma mgbe ọ nwụsịrị ụfọdụ n'ime ntị ya, BW enweghị ike ịnagide nkwụsị. Echiche ya bụ mbibi na ọchịchịrị kwa ụbọchị.
N’agwaghị m ama, ọ laghachitere n’ime mmanya ya. Okwu ya ka dị ntakịrị, ọ bụ ezie na echiche ya ka doro anya nke na o leghaara ntụgharị ihu anya. O leghaara ule na-esote ndị dọkịta anya n'ihi na ọ na-atụ egwu ihe ha ga-eme ya.
Otu enyi ya tụrụ aro ka BW malite site na ọgwụ na-ere ọgwụ maka ịtọpụ stool akpọ loperamide. Ihe ahụ, ọ sịrị, nyeere ya aka ịnagide ọrịa na nkwụsị. Ya mere, BW gbalịrị iweghachi ya.
O buru ụzọ were igbe 1 nke loperamide a. Ọ na-eche oké, ma ọ bụ ka mma karịa ihe ọ bụla. Gbalia igbe 2, o chere.
N’oge ụfọdụ ọ ruru n’ókè nke na obi adịchaghị ya mma, ma ọ naghịzi arịa ọrịa otú ahụ. Ọ chọghị ịma na ọ chọrọ igbe 5 kwa ụbọchị ka ọ ghara iche na ụbụrụ ya na-akụda ya. Ka a ghara iji ọsụsọ saa ya ahụ́ n’ọdọ mmiri nke ya.
Mana ka ụbọchị na-aga, loperamide a bịakwutere ya. Otu ụbọchị nne BW lọtara ọrụ. Ọ banyere n'ime ụlọ ebe ọ hụrụ nwa ya nwoke n'ala, oyi na-acha ọbara ọbara na enweghị ndepụta, mgbe ọ kpọrọ 911.
E weghachitere ya na ụlọ mberede. Mgbe a nyochara ya, BW nwere ụdị ụda olu oge ugbu a. Akpata oyi wụrụ ya laghachi azụ na nkịtị n'afọ iri na ụma na-ndiiche ọzọ.
Nne ya gosiri ndị dọkịta ahụ igbe loperamide ahụ o were. Obi ya na-amalite ịma jijiji, ọ bụghị iti ihe, ma na mberede ọ kwụsịrị. Ndị dọkịta na-agba ọsọ inye ya CPR, iji nye ya ọgwụ iji gbalịa iweghachi obi ya.
Kedu ihe bụ loperamide? Gịnịkwa mere o ji kwụsị obi ya? Ọfọn, nke ahụ na-eme ka anyị laghachi morphine. Ichetara ndị dọkịta Arab ndị gwọrọ stool rụrụ arụ? Ọfọn, morphine nwere ike ọ bụghị ọgwụ kachasị mma maka nke a n'ihi na ọ nwere ike ịmepụta agwa siri ike. Loperamide na-emeso oche oche na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla na-eme, n'ihi na ọ na-ejikọta n'otu akụkụ ahụ na eriri afọ dị ka morphine.
Ma o jikọtara ya na eriri afọ ya, ọ bụghị ụbụrụ ya. Mana iji igbe 5 dị ntakịrị. Otu ọkara nke moperamide molekul dị ka methadone, nke e nyere na opioid ndọrọ rehab.
Yabụ ụfọdụ ndị na-eche na loperamide nwekwara ike ịgwọ nkwụsị. Agaghị m eme nke a n'ihi na nsogbu bụ ndị mmadụ na-anwa ịba ụba dị ka ọtụtụ igbe ya iji nwaa ịmanye ya n'ime ụbụrụ. Thebụrụ na-eguzogide nke ahụ site na ịpịpụta loperamide azụ.
Ọ bụrụ na ọ dị ọtụtụ n'ime ya, nfuli ndị ahụ ga-ejupụta na loperamide ga-ejide ndị na-anabata morphine na ụbụrụ iji mepụta otu mmetụta ahụ. Ma nsogbu bụ na ọkara nke ọzọ dị ka akụkụ nke ọgwụ antipsychotic a na-akpọ haloperidol. Mana anyị amaghị n’ezie ihe nke ahụ pụtara na ụbụrụ ugbu a.
Ihe anyị maara bụ na ọkara ọzọ nke loperamide dịkwa ka ọgwụ ọgwụ obi. Ọ na-ejide obi mgbe ejiri ya n'ọtụtụ buru ibu, ọ na-egbochikwa ọkụ eletrik dị mkpa maka mgbatị ahụ, nke bụ kpọmkwem ihe mere BW. Mgbe minit 25 nke CPR gasịrị, a kpọrọ koodu ahụ.
Ndị dọkịta enweghị ike ime ka ọ gbakee. Purple Drank, Lean, Syrup, ma ọ bụ Texas Tea, ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ ya, n'agbanyeghị aha ọ bụla, emela ya. Ọbụlagodi na ọ bụ swiiti na soda, ihe metụtara ọmentụ, oge ụtọ - ọ jọgburu onwe ya n'echiche na ọ nwere ike ọ ga-ebute oke nhụjuanya na oge.
Ọ ga-eji nwayọ gbagọọ ụzọ i si ebi ndụ na etu esi akpa agwa, ọtụtụ ndị gbanyere mkpọrọgwụ na ya nwere ike ha agaghị amata etu ndụ ha si gbagọọ agbagọ. Ikekwe ụfọdụ maara ya, ụfọdụ n'ime ndị a enweghịkwa ike ịlụ ọgụ ya. See na-ahụ nke a na-eme ọbụnadị ndị ama ama n'ihi na ha enweghị iche na ndị ọzọ.
Ọ baghị uru ịmalite. Emela ya. Ma ewerekwala loperamide, n'ihi na ọ dị ize ndụ karịa uru, dị ka BW.
Daalụ maka ikiri. Ledo onwe gị anya. Ma nwee ahụike.
Nri ose dị ugu nwere ike ime gị ọrịa?
You nwere ike nwetansi nri site naugu? O yighị ka ịgbakwunyeugu oseto nri gịga-akpatansi nri, maugungwaahịanwere ike imeụfọdụ ọrịa jọgburu onwe ha n'ọnọdụ ndị na-adịghị adịkarị.Ọkt 7 2019
INTROJessi: Anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche ebe a na mgbidi taa: ọ bụ Sam ụsụ! Sam: Ndewo, Jessi, m nọ agbataobi m chọrọ ịkele gị, m wetara ụfọdụ biscuits ugu a ma ama. Mgbe ụfọdụ ọ na-adị mma ịnweta obere ọgwụgwọ, ana m ahụkwa ugu n'anya! Mụ onwe m bụkwa .. Anyị ụsụ mkpụrụ osisi hụrụ mkpụrụ osisi n'anya. Mana ị maara, kuki ndị a enweghị enwe ugu ma ọlị? 'N'ezie?' N'ezie! Otutu ihe eji ekponyere ogwu adighi enwe ugu n’ime ha.
Nri ahụ bụ naanị ụyọkọ ngwa nri agwakọtara ọnụ. Ngwa nri bụ ihe anyị na-eji esi nri nke na-esikarị n'akụkụ akụkụ nke ahịhịa nwere ọtụtụ ekpomeekpo, dịka mkpụrụ ụfọdụ ma ọ bụ ọbụlagodi ọtụtụ n'ime ha nwekwara ike siri ike, na-atọkwa ụtọ, ha na-abụkarị, mana ọ bụghị mgbe niile, akpọnwụ ma mee ya powder Ọ bụrụ na ị fụla nri ala ojii na nri gị, nke a bụ ihe atụ nke ose! Oh ee, ana m eme nke ahụ oge niile! Nri dị na ngwa nri siri ike nke na anyị agaghị eri ya naanị - ịnwa iri obere oji naanị ga-ere ọkụ! Kama nke ahụ, a na-eji ihe na-esi ísì ụtọ eme obere nri iji gbakwunye ụdị nri niile. Dị ka ahịhịa, nri? Kpọmkwem! E nwere ụdị ihe ọzọ dị iche na nke ahịhịa ndụ.
Ha bu ahihia akpukpo ahihia nke osisi puru iche ma jiri ya me ka nri di uto, dika ngwa nri. Ngwurugwu anyị ji eme ihe nwere ugu na-esi ísì ụtọ bụ otu ihe a na-eji ntụ ọka eme, ya mere, ụtọ ahụ na-echetara anyị ugu. Oh, ọ bụ ya mere anyị ji akpọ ya ugu ose, ọ bụghị maka na o nwere ugu.
Yup! Fọdụ nri egwụ dị ugu, dị ka ice cream ma ọ bụ yogọt, nwere ike nwee ugu, mana ọ bụghị mgbe niile. N'ime biskiti ndị a, naanị ngwa nri na-echetara anyị ọtụtụ achịcha ugu nke na ha na-atọ ụtọ dị ka ugu na-enweghị ezigbo mkpụrụ? Ngwanu! Jụụ! Gini bu ihe mmanu eji eme ugu ugu? Ọ ga-amasị m ịnwale ya n'onwe m. Ngwakọta a na-enwekarị ụdị ngwa nri ise: cinnamon, ginger, nutmeg, cloves, and allspice.
Oh, anyị nwere cinnamon flavored nri mgbe niile! Mgbe ụfọdụ ọ na-amasị m itinye obere cinnamon na oatmeal m n'ụtụtụ, amakwaara m na Squeaks nwere mmasị ịfesa ihe na chocolate ha dị ụtọ - ụtọ. Deliciousda na-atọ ụtọ! Cinnamon bụ eleghị anya ndị kasị ama nke niile ngwa nri na ugu ose. Ma ị maara na cinnamon bụ n'ezie ogbugbo? O sitere n'osisi a na-akpọ cinnamon! Iji mee cinnamon anyị na-azụta na ụlọ ahịa ahụ, ndị mmadụ na-ewepụ ụgbụgbọ osisi ahụ na bee ya ewepu oyi akwa dị larịị.
Anyị na-eji akwa oyi akwa dị ka ose! Ihe na-esote na ndepụta bụ ginger, nke nwere ụtọ dị ụtọ nke pụrụ iche. Ginger anyị na-eri bụ n'ezie mgbọrọgwụ, akụkụ nke ahịhịa dị n'ime ala. Ọhụrụ ginger nwere ike ile anya dị iche! Know mara, Echere m na m na-erikwa kuki-atọ ụtọ ginger! Ọ bụ na ginger snaps, nri? Zie ezi! Ndị mmadụ na-ejikarị ginger ma nke a mịrị amị esi nri, nke na-adịghị ahụkebe maka nri.
Mgbe ahụ, enwere nutmeg, nke sitere na mkpụrụ. Mgbe ndị mmadụ na-eme nutmeg, ha na-ehichapụ mkpụrụ ahụ na anyanwụ, gwerie ya na ntụ na nke ahụ ghọrọ nutmeg anyị ji eri nri. O siri ike ịkọwa ihe ụtọ nutmeg na-atọ n’ihi na ọ na-agwakọta ya na ngwa nri ndị ọzọ mgbe anyị tinyere ha na nri, mana ị nwere ike ịjụ onye okenye ma ọ nwere nke ọ bụla n’ụlọ gị nke ị ga-anụ isi.
Yabụ kedu ihe ọzọ dị na ugu na ose dị n’adịghị cinnamon, ginger na nutmeg? Cloves na-esote! Ha na-mere si Fikiere ifuru buds. Cloves nwekwara ezigbo isi ísì. Know ma ihe isi na-echetara m? Iji eze omume! Ee! Mgbe ụfọdụ, ndị dọkịta ezé na-eji ya emepụta mmanụ pụrụ iche nke na-enyere aka mgbe ọnụ mmadụ na-afụ ụfụ.
ukwu numbness ịgba ígwè
Yabụ ọ bụghị ụlọ ọrụ eze niile na-esi isi dị ka klọọkụ, mana ụfọdụ na-eme ya. Ekwesịrị m ịjụ dọkịta m eze banyere ya oge ọzọ m gara! Ugbu a, e nwere otu ihe na-esi ísì ọma ikpeazụ n’ime ihe ndị na-eme ugu: allspice! Allspice nke na - enweghị ike ịbụ / ihe niile / na ngwa nri, nri? Oh mba, allspice apụtaghị ngwa nri niile.
You nwere ike iche n’echiche na ngwa nri nile dị n’ime biskit a? Enwere ọtụtụ ngwa nri dị iche iche nke na o siri ike ịgụta ha niile! Ee, echere m na anyị nwere opekata mpe 20 na kichin ebe ahụ siri ike. Allspice nwetara aha ya n’ihi na ndị mmadụ na-eche na ụdị mkpụrụ osisi dị iche iche na-atọ n’ezie dị ka pawuda, cloves, nutmeg, na ose. A na-atụtụ mkpụrụ osisi ahụ, wee mịkpọọ anyanwụ ma ọ bụ nke a ka esi eme allspice! Ya mere, ị nwere ya: pawuda, ginger, nutmeg, cloves na allspice jikọtara iji mee ugu ose! Chaị, yabụ ụdị osisi dị iche iche mebere ugu ugu! E nwere mkpụrụ osisi, ogbugbo, mgbọrọgwụ, mkpụrụ na ifuru ifuru - nke ahụ dị ịtụnanya.
Cant chere nwaa kuki ndị a! Echere m ma m ga-anwale ihe ọ bụla na-esi ísì ụtọ ugbu a na m maara ihe m ga-achọ. Daalụ maka isonyere anyị! Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnọgide na-enyocha ụdị ihe niile gbasara ụwa anyị na-adọrọ mmasị, pịa bọtịnụ ntinye aha ma echefula ileta anyị na ngwa ụmụaka youtube. Lee gị oge ọzọ ebe a! Sam: Daalụ!
Nri udiri nwere ike iwe iwe gi?
.B.16-ounce grande PSL nwere gram 50nkeshuga, nke bukaotutunkegbakwunye shuga makakaụọ ihe ọ .ụ .ụ. 'Oké shuganwere ikeiduga na ahụ erughị ala, bloating, na gas nanke gitract nri, 'ka Torey Armul, MS, RDN, LD na-ekwu,kaonye na-ekwuchitere nri na onye ọnụ na-ekwuchitere yamakaAcademylọ akwụkwọ AmericankeNri na Dietetics.Ọgọst 29 2018
Mgbe Fall 2020 bịarutere, ọtụtụ mmadụ nwere obi ekele maka ihu igwe dị jụụ na ezumike ole na ole na-atọ ụtọ na mbara igwe, mana ndị hụrụ achịcha mara amara nwere ihe ọzọ mere a ga-eji mee ememme, Septemba ruo Disemba bụ Oge Achịcha Achịcha na Costco mgbe ị Na-adịghị ịmara Costco na-ewu ewu nke na ọtụtụ nde mmadụ na-efe n'elu shelf kwa afọ. Odi otutu akwukwo Facebook nke enyere ya n’ogo ya, achicha ugu a di nma karie mgbe ichoghi ime achicha n’ulo gi maka nri abali ozo nke Christmas, ma obu mgbe ichoro ihe uto nke uto ndi turkish nụrụ ụtọ ugu achịcha ị ga-ahụ ihe niile ekwuru na mkparịta ụka ịntanetị na nso nso a n'etiti ndị na-eri paịlịkị na-ekpughere ntụpọ na-enweghị atụ na achịcha Krismas a hụrụ n'anya nke nwere ike ime ka ị chegharịa atụmatụ eji megharịa ọnụ n'afọ a, mgbe ị dị njikere ịga tocostco maka a achịcha ma ọ bụ abụọ na-a theira ntị na ịdọ aka ná ntị ha na mbụ na coupon na nchekwa blog na-egosipụtakwa ụfọdụ ihe na-adọrọ mmasị ma na-asọ oyi banyere ụdị nke achịcha ugu nke Costco bụ nke na-akpata nchegbu maka ndị ọrụ na-echegbu onwe ha ma na-atụ ụjọ na ọnụnọ mmetụta dị njọ na Piekin Pie. Na-ejuputa ma chọpụta na ọka ha abụọ na-arụ na-echegbu m n'ihi na ọ dị ka ọ na-apụta site na ndochi ahụ, ihe ụwa ga-abụ ọka na ndochi, ihe nke ọzọ dara na m zụtara otu na Costco na Nọvemba gara aga na nke ọzọ iji kpọgara nwa anyị nwanyị n'ụlọ ụbọchị ekele, yabụ, na mberede, kedụ ihe na-eme na ebe a na-eme achịcha Costco? Ugbo a na-eji mee ugu Costco ugu dị iche iche, dịka ndị otu Costco si kwuo, nke a na-akpọ Dickinson's The Curious Notes bụ ndị jiri otu Dickinson mee ihe na ụdị Libby a ma ama nke a na-etinye ugu n'ime bekee. Akwukwo Facebook sitere n'aka onye ahia Libby kpughere ufodu ihe ojoo banyere udiri nke ndi Costco a ma ama, akwukwo mbu nke Darcy Schultz nke anakpo ugu nke Libby maka idi ojoo na ichota ihe kariri ihe 400, na otutu ihe na-achoputa ihe ntanye Costco site na nsogbu otu nsogbu.
O doro anya na ndị mmadụ chere na achịcha Costco sitere na ugu nke mkpọ Libby, nke na-abụghị kpọmkwem okwu ahụ, ha na-eji otu ụdị ugu dị iche iche eme ihe, mana nke ahụ anaghị eme ka ndị achicha achicha bụrụ eziokwu karịa Costco aja sandy gritty pump pie pie and ha emeghi ihere ikenye otutu okwu ndi kwuru banyere nkpuru unwelcome na ihe nkpasu iwe nke o na enye ihe kwesiri ibu ezigbo ochicha nke juputara na nkwuputa dika oge obula m nwetara Costco ugu paịki m gbakwunyere ntakịrị gritsand na onye ọzọ agbakwunyere achicha ọ bụla si costco Nke ahụ mere ka m nwee mmetụta nke na-egbuke egbuke Ihe kachasị ọhụrụ dị ka ọnụọgụ nke otu ihe bụ ájá onye ọzọ chọpụtara na ọ bụ naanị Cocco riri achịcha ugu ole na ole ma mee ihe ndị ọzọ dị iche iche na ọka n'ihi na ndị otu libbies nyere ya dabere na nkwupụta banyere ájá na ọka dị n'ụdị kichin ya na-enyocha rbiss zara sistemụ ịsacha na ugu, ma dị ka letus, obere ọka ma ọ bụ ájá nwere ike ime ya site na usoro ịsacha anyị yikarịrị ka Costco's e xplanation ga-aga n'otu uzo ma obu ezie na o dozi ihe omimi nke ihe ojoo ahu, o ka bu ihe na-asọ oyi, o nweghi onye Costco kwuru na onye ahia ahia buru ahia na akwukwo ha, ma anyi ahughi nzaghachi nke ulo oru Costco ejiri otu piercipe eme ihe kemgbe 1987 ma anyị kwenyesiri ike na ọ gụnyere Sandnor Grite. N'iburu ihe nchọpụta ndị a n'uche, ị nwere ike ịchọrọ iche ugboro abụọ tupu ịzụrụ Costco Pumpkin Pie maka nri abalị ọzọ gị, isiokwu ndị kachasị ọhụrụ anyị ebe a tinyere ihe ndị ọzọ agwakọtara banyere ụlọ ahịa kachasị amasị gị chfa ains na-abịa n'oge adịghị anyaDebanye aha na channel Youtube anyị ma gbanye ụda ahụ mgbịrịgba n'ihi na ị ghara Agbaghara otu onye
Ogbe ogwu bu ogwu na agba?
Iji dozie ndekọ ahụ, azịza dị mfe maka ajụjụ a bụ mba,ugu osefọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ naghị akpataafọ ntachi. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla,ugu oseEfrata dị ka ginger na allspice ga-akwalite oge niile, ghara ịkọ gbasara agwa kọfị nke ịtụkwasị obi.08.31.2018
Nri a na-esi ísì ụtọ ọ dị mma?
NdiUgu ose LattesỌ̀ Dị Adịịrị Gị n'Ezie? Inwe calorie ndị ahụ nashuganyefere gị ngwa ngwa site na mmiri adịghịgbasiri ike, ndị ọkachamara na-ekwu. Nri 16-ounce nke Starbucks 'nke nwere 2 pasent mmiri ara ehi na ude ntụ nwere 380 calorie ma nwee gram 50 nkeshuga.04.10.2016
Enwere ike iri ugu ụbọchị niile?
A naghị adụ ya ọdụriekarịa akwadorokwa ụbọchịego. Ọ bụrụ na ịrieọtụtụ, ị nwere ike ịnwe ikuku na ikuku. Eriri nauguMkpụrụ nwere ike inyere aka bulie nnukwu oche ma gbochie afọ ntachi n'ikpeazụ. Otú ọ dị,na-eri nriokeugumkpụrụ n’otu oge nwere ike ibute afọ ntachi.16.12.2020
Kedu ihe ọghọm nke ugu?
Ugumkpụrụ nwere ọgaranya na fiber na magnesium ma nwee ike inye aka gbochie ọrịa kansa. Enwere ndị ọ bụlammetụta dị n'akụkụna-eri nriugu(ma ha bụ nsi)? Mba,uguha adịghị egbu egbu, ha dịkwa mma ma dị mma maka mmadụ iri ha. Enweghị ndị ọ bụla marammetụta dị n'akụkụna-eri nriugu, ọ bụrụhaala na ị naghị anabata ahụ.29.10.2020
Gịnị mere ugu jiri bụrụ ihe ọjọọ maka ahụike?
Mana ụfọdụ ndị nwere ike ịnwe ihe nfụkasị mgbe ha risịrị nriugu. Ọ bụ diuretic dị nwayọ na ọdịdị ma nwee ike imerụ ndị na-a takeụ ọgwụ dịka lithium.Ugubụ ihe niilegbasiri ikemanaugudabere na nri ratụ ratụ dị ka lattes, achịcha na swiiti jupụtara na shuga, nke bụadịghị mma maka ahụike.
Gini mere eji eme udidi udiri ihe ojoo?
Ogologo ọkọlọtọUgu ose Lattenwere ihe dị ka otu shuga ị ga-achọta na 50 Skittles. Choosing na-ahọrọ mmanya na-a -ụkarị shuga ugboro ugboro bụ ihe dị egwu na ahụike gị. Ọ bụghị naanị na ọ nwere ike idugaogbenyeihe mejupụtara ahụ, mana ọ na - eme ka ihe egwu gị pụta ọtụtụ nsogbu ahụike na - adịghị mma.Ọkt 8 2020
Kedu nri ndị dị mma iji nri ugu mee?
Anaghị emepụta ngwaahịa ure ugu niile dị nha, yabụ anyị achịkọtara aka karịa ka ị zụta ebe ị nwere ike. N'adịghị ka achịcha ugu ejiri tinye n'ụlọ ahịa ahụ, Ogwe zuru oke na-emepụta obere nri ya na nri iri abụọ 20 gụnyere kelp, alfalfa, flaxseed, butter butter.
Ọ dị mma ị drinkụ ugu Spice Latte?
Na-etinye ugu ose latte ala. Anyị maara na nke a siri ike ịnụ, ọkachasị ebe ị na-eche ya kemgbe afọ niile, mana gee ntị. Rinụ nnukwu PSL site na Starbucks dị ka ịwụfu obere ngaji shuga 13 n'ime ọnụ gị.
Kuki ole na ole esi nri dị n’ime akpa?
Iri uki kuki abụọ nke ga - eme ka ị kụọ gram sugar abụọ - ọ bụ ihe nke abụọ edepụtara na aha ahụ, ka emechara — yabụ buru n'uche ole ị ga-eri ma ọ bụrụ na ị zụta akpa.